भाेली कसरी पढिएला अाजकाे समय? - BP Bichar
Home/विचार/भाेली कसरी पढिएला अाजकाे समय?
BP BicharAugust 6, 2018
सोमबार, २१ साउन २०७५ काठमाडौ ,नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विगतका दुई घटना अत्यन्त रोमाञ्चक रहेका छन् । मनुष्यलाई आफ्ना समकालीन घटना–क्रम निहितार्थ थाहा हुँदैन । भोलि इतिहासका पानामा यी कुरा लेखिँदा यस्ता परिवर्तनले गौरवपूर्ण विशेषण प्राप्त गर्छन् । इङ्ग्ल्यान्डको सन् १६८८ को क्रान्तिलाई आज गौरवपूर्ण भनिन्छ । १७८९ को फ्रान्सेली राज्य–क्रान्ति पनि तत्कालीन नजरमा महान् कहलिएको थिएन होला । विगत दशकमा नेपालमा भएको परिवर्तनले एक दिन यस्तै अद्वितीय विशेषण प्राप्त पनि गर्न सक्छ । तर नगर्न पनि सक्छ।
नागरिकबाट साभार गरिएको ।